I-Milgamma noma i-Neuromultivitis, Combilipen, Binavit - ukuqhathanisa kwezidakamizwa > Ukwelashwa nokuvimbela
Ongakukhetha: Combilipen noma Milgma?
Umzimba womuntu, njengazo zonke izinto eziphilayo endalweni, uyakhathala. Futhi akunakwenzeka ukuthonya izinqubo zokuguga kwemvelo, izinqubo zokuvuvukala, ukulimala okungenzeka kanye nomonakalo ohlelweni lwe-musculoskeletal, ukusebenza kokuphazamiseka kohlelo lwezinzwa. Izimo ezicindezelayo, izici zobungcweti, ukuphakamisa izinsimbi, imithwalo ngesikhathi sokudlala imidlalo - konke lokhu kungaholela ekuguqukeni kwesakhiwo se-myelin sheaths of nerve endings, lead pain. Imithi equkethe izinhlobo zamavithamini nezakhi ze-analgesic ezidingekayo emzimbeni zisiza ukuqeda izinhlungu, ezinjengeMilgamma, Neuromultimit, Combilipen nabanye.
Kukhona iqembu lonke lemithi ebekelwe izifo ezinjenge-neuralgic ukuphazamiseka (i-osteochondrosis, i-facial nerve paresis, i-neuralgia, i-plexopathy, i-polyneuropathy, njll), i-vegetovascular dystonia (VVD), nezinye izifo ezihambisana nokuntuleka kwamavithamini emzimbeni B. Ezisetshenziswa kakhulu kule ndawo yezokwelapha, zithole izidakamizwa ezinjengeMilgamma, Neuromultimit, Combilipen nezinye. Ngemuva kokwenza uqhathaniso phakathi kwezidakamizwa, ungathola izinzuzo zomuthi ngamunye ekwelapheni i-pathology ethile.
Umuthi ongalawulwa nokuzilapha kungaholela emiphumeleni edabukisayo futhi engalindeleki. Emtholampilo waseYusupov, ukuvimbela kanye nokwelashwa kwalezi zifo kubhekelwa ngempumelelo nodokotela abaholayo bale nhloko-dolobha, besebenzisa imishini esezingeni eliphakeme nezindlela zomuthi zanamuhla. Ngeminye imininingwane, thintana nabaluleki basesibhedlela ngokushayela ucingo.
I-Kombilipen, i-Binavit, iNeuromultivit neMilgamm: ukuqhathanisa ukwakheka kwezidakamizwa
Umzimba womuntu awukwazi ukwenza ngaphandle kwamavithamini adingekayo ekusebenzeni kwawo okujwayelekile. Iqembu elibalulekile lezinto ezinjalo ngamavithamini eqembu B, ayingxenye yezakhiwo zemithi iMilgamma neNeuromultivit:
B1 (thiamine). Ihlanganyela kuzo zonke izinqubo zokushintshana kwamandla. Ngaphandle kwawo, ukumunyaniswa kwama-amino acid, i-lipid ne-protein metabolism emzimbeni akunakwenzeka. I-Thiamine inethonya elizuzayo ekusebenzeni kwengqondo nakuhlelo lwezinzwa lulonke.
I-B6 (pyridoxine). Inomphumela oqondile kumetabolism futhi ilawula isenzo se-enzyme. Kuyadingeka ekusebenzeni okubushelelezi kwama-immune system, amaseli wezinhliziyo nezinzwa. Inesibopho sokuhlanganiswa kwama-neurotransmitters (athinta imizwa yomuntu kanye nomsebenzi wakhe wengqondo) kanye nokwakheka kwama-prostaglandins (izinto ezilawula umfutho wegazi nokusebenza kwenhliziyo).
B12 (cyanocobalamin). Ikhuthaza ukwakheka kwama-asidi e-nucleic, obhekele i-biosynthesis yolwelwesi oluvikelayo lokuphela kwezinzwa kanye nemicu. Kuthinta ukuqubuka kwegazi, inani laso emzimbeni womuntu lehlisa i-cholesterol.
I-Milgamma noma i-Neuromultivitis: yikuphi okungcono?
IMilgamma neNeuromultivitis zingama-ejenti ayinkimbinkimbi okwelapha aqukethe amavithamini amathathu e-B (thiamine, pyridoxine ne-cyanocobalamin).
Lapho sibheka ukwakheka kwale mishanguzo yokwelapha, singaphetha ngokuthi zombili lezi zinkimbinkimbi ziqukethe inani elifanayo lamavithamini angama-B. Kodwa-ke, iMilgamma, ngokungafani neNeuromultivitis, iqukethe i-lidocaine hydrochloride, evumela ukuthi kube nomphumela we-analgesic ngesikhathi sokujova.
I-Combilipen noma iMilgamm: yini engcono?
ICombilipen neMilgma ziyefana ngokuphelele ekwakhiweni kwazo. Yomibili le mishanguzo iqeda ukungasebenzi kahle ohlelweni lwezinzwa oluphakathi. Kodwa-ke, kufanele kuphawulwe ukuthi i-spectrum yokusetshenziswa kwamalungiselelo we-vithamini Combilipen noma iMilgamma yehlukile.
Ukusetshenziswa kweMilgma kukhuthaza ukwenziwa kabusha kwezicubu zezinzwa, kuthuthukisa ukuhamba kwegazi, futhi kuthinte ngempumelelo ukwenziwa kwethonya lezinzwa. KwakunguMilgamma owaziwa njengethuluzi elihle kakhulu lezokwelapha lokuqeda i-radicular syndrome. Ngaphezu komthelela ojwayelekile wokuqinisa umzimba, iMilgma isetshenziswa ekwelapheni izifo ezifana ne-neuritis, i-facial paresis kanye nokutheleleka kwe-herpesvirus.
ICombilipen inconywe ngochwepheshe nge-polyneuropathy eyenzeka ezigulini ezinesifo sikashukela nalabo abasebenzisa kabi utshwala, ibaluleke kakhulu ekwelapheni i-neongia ye-trigeminal. Umuthi unomphumela we-analgesic kuma-pathologies ahlukahlukene omgogodla, ukuvuvukala kwezinzwa zobuso, i-radicular, lumbar kanye ne-cervicobrachial syndrome, neuralgia ye-intercostal kanye nezinye izifo.
Lapho kuphakama umbuzo ophikisayo - iCombibilpen noma iMilgamm: yini engcono? - Ukubuyekezwa kochwepheshe abakhethekile kuxubekile. Kuyemukelwa ngokuvamile ukuthi ezigulini ezinezinkinga zemisipha yenhliziyo, iCombilipen iseyisidakamizwa esivikelekile ukwedlula iMilgamma.
I-Binavit noma iMilgamm: yini engcono?
IBinavit iyi-analogue yeMilgma neCombilipen. Lesi sidakamizwa sokuhlanganiswa esiqukethe amavithamini we-B (thiamine, pyridoxine, cyanocobalamin). Zonke lezi zingxenye zinomphumela omuhle kwizifo eziwohlokayo nezokuvuvukala zama-nerve kanye nesistimu ye-musculoskeletal. Zisetshenziselwa ukuqeda izimo ze-hypovitaminosis, futhi kumithamo ephezulu inezindawo ze-analgesic. Ngaphezu kwalokho, bandisa ukuhamba kwegazi futhi benze ukusebenza okujwayelekile kohlelo lwezinzwa kube lula. I-Binavit inezindawo ezifanayo ze-pharmacodynamic zeMilgamme, futhi inhloso yesidakamizwa incike ekuncomeni kukadokotela nasempendulweni yesiguli ezenzweni zezidakamizwa.
I-Milgamma noma i-Movalis: yikuphi okungcono?
Ukuqhathanisa lezi zidakamizwa ezimbili kunzima impela, ngoba ukwakheka kwazo kuhluke ngokuphelele. I-Milgamma ingumkhiqizo oyinkimbinkimbi wamavithamini onomphumela we-analgesic. Inomphumela wokuvuselela ukwelashwa emzimbeni wesiguli. I-Movalis igxile ngokucacile ikakhulukazi kuma-analgesic, anti-inflammatory and antipyretic imiphumela. Ukwakheka kwalesi sidakamizwa akubandakanyi amavithamini e-B, isakhi esiyinhloko yi-Meloxicam, ekhombisa imisebenzi ephezulu yokulwa nokuvuvukala kuzo zonke izigaba zokuvuvukala. Kwezinye izimo, odokotela batusa ukuthatha ama-Movalis ahlanganiswe neMilgma, njengoba Ngaphezu kwezakhiwo zayo zokuhlaziywa, iMilgamm isiza ukuqinisa umzimba kanye nokudla inani elilinganayo lamavithamini B.
I-Compligam noma iMilgamm: yini engcono?
I-Complig ekwakhiweni kwayo ifana ngokuphelele neMilgamm. Izakhi eziphambili zalo muthi ngamavithamini e-B (B1, B6, B12). Ukuba khona kwamavithamini B ne-lidocaine hydrochloride kuzo zombili lezi zidakamizwa kuzenza zilingane ekwelapheni ukuphazamiseka kwemizwa, i-vegetovascular dystonia kanye nezinye izifo ezithile. Ngakho-ke, ukuphikisana kwalezi zidakamizwa ezimbili nakho kuyafana. Inzuzo yeCompligam ukuthi kubantu abanomnotho kuyindlela engabizi kakhulu futhi eyamukelekayo.
I-Cocarnith noma iMilgma: yini engcono?
I-Cocarnit iyinkimbinkimbi ekhethiwe yezinto ze-metabolic namavithamini. Isakhi sayo esiyinhloko yi-nicotinamide. Le yifomu le-vithamini le-PP. Ibhekene nezinqubo ze-redox emangqamuzaneni, ithuthukise i-carbohydrate kanye ne-nitrogen metabolism, i-normalization metabolid ye-lipid, futhi inciphise izinga lama-lipoprotein e-atherogenic egazini. Enye yezakhi zayo i-Vitamin B12 (cyanocobalamin), ekhuthaza ukwakheka kwama-asidi we-niticic, ethinta i-biosynthesis yolwelwesi oluvikelayo lwama-nerve fibers. I-vithamini efanayo ikhona eMilgamma. Kepha uma iMilgamm nayo inomphumela osheshayo we-analgesic, khona-ke iKokarnit ihloselwe ukuthuthukisa ukusebenza komzimba wonke, ukusheshisa izinqubo zokutakula kumaseli.
I-Neurobion noma iMilgamm: yini engcono?
I-Neurobion, njengalo lonke uchungechunge lwe-analogue yezidakamizwa, iyinkimbinkimbi yamavithamini we-B (B1, B6, B12). Inkomba enkulu ukusiza iziguli ezinezifo zemizwa ezibangelwa ukuntuleka kwale nkimbinkimbi yamavithamini. Umuthi unomphumela ojwayelekile wokwelapha. IMilgraine futhi inohlu olubanzi lwezicelo, inomphumela ojulile futhi osebenzayo wokwelapha, ukhulula imizwa ebuhlungu kakhulu.
Izinzuzo ezilethwa emzimbeni womuntu ngamavithamini B azinakuphikwa. Kodwa-ke, umuntu akufanele akhohlwe ukuthi ukuthatha le mishanguzo ngemithamo eyeqisayo kuholela ekunyukeni kwenjabulo, kunomthelela omubi ezithweni zangaphakathi, ikakhulukazi ezinso nasezibindini.
Lapho ukhetha noma yisiphi isidakamizwa, udinga ukubonana nochwepheshe. Ungenza ithuba lokubonana nodokotela ojwayelekile noma udokotela oyi-neuropathologist esibhedlela saseYusupov bese uthola izimpendulo zemibuzo yakho ku-inthanethi noma kwiwebhusayithi ngokuxhumana nabaluleki bethu.
Umuthi uqukethe amavithamini e-B. Ifomu lokukhipha lingahluka: amaphilisi, isixazululo somjovo we-intramuscular. Iphakethe liqukethe, ngokulandelana: ama-30 noma ama-60 ama-pcs., Ama-5 noma ama-10 ampoules we-2 ml. Umkhiqizi walesi sidakamizwa yi-Pharmstandard-UfaVITA OJSC (Russia). I-Combilipen ingeyeqembu lama-Vitamin complexes. Ukwakheka:
Into ngayinye yezinto ezisebenzayo ithinta amasistimu ahlukahlukene omzimba. Ngakho-ke, i-thiamine hydrochloride, noma uvithamini B1 ubandakanyeka kumetabolism. Ngaphandle kwayo, inqubo yokuguqula amaprotheni, amafutha kanye nama-carbohydrate ayaphazamiseka, okungaholela kwinani lama-pathologies. Le vithamini itholakala kwezicubu ezihlukile: ezinye izitho zangaphakathi, izicubu zamathambo. Kuyadingeka ukuthi ukwenziwa okujwayelekile kwesistimu yenhliziyo, umgudu wokugaya ukudla, ubuchopho, uhlelo lwezinzwa.
Ezimweni eziningi, ukuntuleka kwe-thiamine emzimbeni kubangelwa ukungondleki. Lokhu kungenxa yokuthi i-vithamini elinjalo lingamanzi lincibilikisiwe futhi alinqwabelani emzimbeni. Ngakho-ke, amanye amasheya kufanele ahlinzekwe ngokungemthetho, kuthatha i-vitamin tata. Kufanele wazi ukuthi eminye imikhiqizo, kunalokho, ineqhaza ekunciphiseni kwenani le-thiamine: inhlanzi nokudla kwasolwandle, itiye, ikhofi.
Njengoba kunikezwe ukuthi i-Vitamin B1 ithinta ubuchopho, kanye nokushoda kwale nto, ukwazi ukungasebenzi kahle, ukwehla kokusebenza kwengqondo nangokomzimba, ukwehla komsebenzi wezimoto kanye nokuvela kwama-pathologies ahlukahlukene wesistimu ye-musculoskeletal. Lokhu futhi kungenxa yokuthi i-thiamine itholakala emsipha wamathambo. Ukushoda kwale vithamini kuholela ekulahlekelweni yimemori.
Enye into esebenzayo (pyridoxine hydrochloride) isiza ukwenza uhlelo lwe-hematopoiesis lube ngokwejwayelekile. Ubandakanyeka kokudla kwama-carbohydrate, amafutha, amaprotheni. Ngaphandle kwe-vithamini B6, ukusebenza okujwayelekile kohlelo lwezinzwa oluphakathi nolweqile akunakwenzeka. Ngaphandle kwe-pyridoxine, akukho ukuthutha kwezinto ezithile ku-nerve sheath. Ngokuhlanganiswa kwamavithamini B1 no-B6, umphumela wabo onamandla komunye nomunye uyaphawulwa. Ngenxa yalokhu, umphumela omuhle wokwelapha uqhubeka isikhathi eside.
Umsebenzi oyinhloko we-Vitamin B12, noma i-cyanocobalamin, yikhono lokuthonya ukwakheka kwama-nucleotides. Ngenxa yalokhu, ukuguquguquka kwenqubo yokukhula, ukubuyiselwa kohlelo lwe-hematopoietic, kanye nokuthuthukiswa kwamaseli we-epithelial kuyaphawulwa. Ngaphandle kwe-vithamini B12, i-folic acid metabolism kanye nokukhiqizwa kwe-myelin kuyaphazamiseka.
Ngaphezu kwalokho, umuthi ufaka i-lidocaine - i-anesthetic. Umsebenzi wayo ophambili ukunciphisa ubukhulu bezinhlungu. Kodwa-ke, le nto ayiqedi imbangela yokungajabuli. Kusetshenziswa njengento yokubulala izinzwa. Umphumela we-lidocaine kumthamo omncane uhlala isikhathi esifushane. Le nto ivimba inqubo yokudlulisela okufakwayo emaphethelweni ezinzwa, okufaka isandla ekukhululekeni kwesikhashana. Izinkomba zokusetshenziswa kweCombilipen:
i-neuropathies ye-genesis ehlukile,
i-nerve nerve neuritis,
ukuphazamiseka kohlelo lwe-musculoskeletal,
i-neuralgia yama-etiologies ahlukahlukene.
Lesi sidakamizwa akufanele sisetshenziswe kwezinye izimo:
hypersensitivity kwezithako ezisebenzayo,
ukwehluleka okukhulu futhi okungapheli kwenhliziyo,
abesifazane abakhulelwe nangesikhathi sokuzala.
Isakhi esisebenzayo (i-pyridoxine hydrochloride), esiyingxenye yeCombipilene, sinomthelela ekwenzeni inqubo ejwayelekile ye-hematopoiesis.
Ngemiphumela engemihle ebaluliwe:
ukuthuthukiswa kokungezwani komzimba okuhambisana nokuqunjelwa, ukulunywa,
shintsha izinga lokushaya kwenhliziyo,
imivimbo ebusweni, umqubuko,
ukucasulwa endaweni yomjovo.
Uma kusetshenziswa i-ejenti equkethe i-lidocaine (Combilipen), usizo olwengeziwe lobuhlungu aludingeki. Lokhu kungenxa yokuthi ngokuphatha i-intramuscular, i-anesthetic iqala ukusebenza ngokushesha. Ngenxa yalokho, usizi luqedwa. Kuleli fomu, lesi sidakamizwa sinconywa ukuthi sisetshenziswe lapho izimo ze-pathological zikhula, zihambisana nemizwa ebuhlungu: i-neuralgia, ukwephulwa kohlelo lwe-musculoskeletal.
Uma kunokuwohloka okuncane emisebenzini yobuchopho, uhlelo lwezinzwa, kunconyelwa ukusebenzisa iCombilipen ezibhebheni. Ukwakheka kwalesi sidakamizwa kwehluke kancane. Ngakho-ke, ayinayo i-lidocaine, okusho ukuthi ayikhombisi umphumela wokubulala izinzwa. Ngaphezu kwalokho, inani le-cyanocobalamin kuthebhulethi eyi-2 ngu-2 mg, ephindwe kabili kunalokho equkethe i-2 ml yesisombululo (1 mg we-Vitamin B12).
Ngabe usebenza kanjani uMilgma?
Umuthi ungathengwa kuphela ngesimo sewuketshezi. Uma udinga ukuyithatha kwamanye amafomu wesilinganiso, kufanele unake i-analogue yeMilgamma Compositum. Lo mkhiqizo ungathengwa ezibhebheni. IMilgamm itholakala kuma-ampoules ama-2 ml (ama-5, ama-10 kanye nama-25 ama-pcs. Ngephakethe ngalinye). Izakhi ezisebenzayo ezisetshenziswayo yi-thiamine hydrochloride, pyridoxine hydrochloride, cyanocobalamin, kanye ne-lidocaine. Umthamo walezi zinto ku-2 ml ye-Milgamma uyefana nakwisimo se-ejenti ebonwa ngaphambili.
Ukuqhathanisa kweCombilipen, iMilgamm
Zombili lezi zidakamizwa zinezithako ezisebenzayo ezifanayo. Lokhu kubenza bashintshane. Ngenxa yokufana kokuqanjwa, laba bantu banikeza umphumela ofanayo ekwelapheni. Ukusetshenziswa kohlobo olufanayo lwezinto ezisebenzayo ekwenziweni kwezidakamizwa kuvumela ukuthi zisetshenziselwe ukwelapha izimo ezifanayo ze-pathological. Ukuxhumanisa kwalezi zidakamizwa nakho akuguquki. Ngokwesethi yemiphumela emibi, le mishanguzo yehlukile. Lokhu kufana kubangelwa ukwakheka okufanayo.
Ngokunikwa ukuthi le mithi iqukethe izinto ezifanayo, yenza ngokwezimiso ezifanayo, yenza ukusabela okufanayo okubi, futhi futhi ikhishwe ngendlela efanayo, akukho mehluko phakathi kweCombilipen neMilgamma. Uma ngasizathu simbe eyodwa yale mithi ingafanele (ukungabekezelelani ngakunye kwengxenye esebenzayo kuthuthuka), i-analogue enokwakheka okufanayo akufanele isetshenziswe. Lokhu kungenxa yokuthi kuleli cala hypersensitivity yezinto ezisebenzayo kungenzeka futhi, ngoba izingoma zamalungiselelo ziyefana.
I-Combilipen ingathengwa ngama-ruble ayi-150-240., Okuncike kwinani lama-ampoules kwiphakeji. Ukuze uqhathanise, isidakamizwa iMilgamma sibiza ama-ruble angama-300. Intengo ingeyomkhiqizo, otholakala kwiphakeji equkethe ama-ampoules ayi-5. Ngaphezu kwalokho, umthamo wento yezidakamizwa ku-1 ampoule uyafana kuzo zombili izimo - 2 ml.Uma unikezwe ukuthi iCombilipen ngenani eliphansi (ama-ampoules ama-5 we-2 ml) ibiza ama-ruble angama-150, kanti iMilgamma - ama-ruble angama-300, kungashiwo ukuthi ukwelashwa ngeyokugcina yemithi kuzobiza ngaphezulu, yize kufana ngokuphelele nale mishanguzo.
Nge-osteochondrosis, iMilgma izonciphisa ubukhulu bezinhlungu.
Yini engcono iCombilipen noma iMilgamm?
Lapho uqhathanisa izidakamizwa, imingcele yazo eyinhloko kufanele icatshangwe: ukwakheka, izinkomba zokusetshenziswa, i-contraindication, imiphumela emibi, ukuxhumana nezinye izindlela, amathuba okusebenzisa ngesikhathi sokukhulelwa nasebuntwaneni. Ngaphezu kwalokho, indlela yokusebenza iyabhekwa. Le nqubo iyisihluthulelo, ngoba ikuvumela ukuthi uhlole ukusebenza kwemithi ngesikhathi sokwelashwa.
Uma kuqhathaniswa, okusebenza kakhudlwana: iMilgma noma i-Combilipen, cabanga ukufana kokuqanjwa kwale mithi, kanye nendlela eyodwa yokwenza into emzimbeni. Okwamanye amapharamitha angenhla, lezi zimali nazo ziyefana, okusho ukuthi akunakuphikwa ukuthi umuthi owodwa usebenza kangcono kunomunye. Ziyafana, ngakho-ke zinomphumela omuhle ngokuqina okulinganayo kuma-pathologies ahlukahlukene. ICombilipen neMilgamma - zombili lezi zidakamizwa zisetshenziselwa imijovo, ifomu lomthamo liyafana - isisombululo.
Lapho kuvela isifo esinjalo, kuvela imizwa ebuhlungu, ngoba kuleli cala kukhona ukwephulwa kwesakhiwo sezicubu ze-cartilage. Ngakho-ke, ukusetshenziswa kwezidakamizwa zombili (i-Combilipen neMilgma) kuzokwehlisa ubukhulu bezinhlungu. Lokhu kungenxa yokuthi ukwakheka kufaka phakathi i-lidocaine, enomphumela wezinzwa wendawo. Ngakho-ke, ngokuya kokusebenza kahle, zombili lezi zidakamizwa zizofaka isandla ku-anesthesia kanye nokwejwayelekile kwezinqubo ze-metabolic kuzicubu ngezinga elifanayo.
Isibonelo, uma ufaka izinhlobo ezahlukene zalezi zidakamizwa kumathebulethi, uzodinga ngaphezu kwalokho ukuqeda izinhlungu. Lokhu kungenxa yokuhluka kwezinye izingoma: ayikho i-lidocaine. Ukulungiswa kweCombilipen neMilgma kwifomu eqinile kusebenza kakhulu lapho kudingeka ukugcwalisa ukuntuleka kwamavithamini we-B, futhi akukho bunzima ekuthanjeni kwezicubu.
UMarina, oneminyaka engama-39, uVladivostok
Ngisebenzise i-Combilipen kusixazululo, ngemuva kwalokho ngazizwa ngijabule isikhashana. Izinguquko ezinhle zangaphakathi azibonakali ngokushesha, kepha leli khambi lisusa izinhlungu ngesikhathi se-musculoskeletal pathologies ngokushesha. Ngokuhamba kwesikhathi, ungabona ukuthi umuthi uthinte kanjani uhlelo lwezinzwa. Ngokwami, kube nezinguquko ezilandelayo: inkumbulo yathuthukiswa, ukudlula kokungabekezeleleki.
U-Olga, oneminyaka engama-45 ubudala, Sevastopol
UMilgamm wasiza ngobuhlungu lapho kukhona i-hernias yomgogodla. Leli thuluzi liqukethe umuzwa wokubulala izinzwa, ngakho-ke ukwanda kwesifo kuhlupheke kahle. Izikhathi ezithile, imizwa engathandeki emuva ivele futhi. Ngenxa yalesi sizathu, imvamisa kufanele usebenzise iMilgamma. Ngokungeziwe ku-anesthetic, ukwakheka kufaka amavithamini e-B, okuyisibonelelo kimi, ngoba kukhona nokuphazamiseka kwesistimu yezinzwa. Ngizizwa ngikhululekile ngemuva kwenkambo yokwelashwa ngaleli khambi.
Ukubuyekezwa kodokotela kuCombilipen naseMilgma
I-Shevchuk M.V., i-endocrinologist, eneminyaka engama-33, uNizhny Novgorod
Imvamisa ngincoma iCombilipen ezigulini ezitholakala ukuthi zinesifo sikashukela futhi ziye zakha i-polyneuropathy. Ngicabanga ukuthi leli thuluzi lisebenza kakhulu eqenjini lami. Ngaphezu kwalokho, intengo yeCombilipen nayo iqhathanisa kahle nenqwaba yezichazi, futhi ngisho nakulezo ezinokwakheka okufanayo.
Lapin R.V., udokotela ohlinzayo, oneminyaka engama-39 ubudala, eMoscow
I-Milgamma - ithuluzi elinezinga eliphakeme lokusebenza liqeda izimpawu ze-neuralgia, izifo zohlelo lwe-musculoskeletal. Imiphumela emibi ngesikhathi sokwelashwa nalesi ejenti iyaqabukela, ezimweni eziningi lokhu kwenzeka ngokuthambekela kokuvela komzimba.
I-Vitamin ngayinye equkethe izakhiwo ezichaziwe, ngendlela yayo, ithinta umzimba womuntu, isiza kusuka kuma-pathologies athile.
Thiamine. Kuyadingeka enkambweni efanelekile ye-carbohydrate kanye ne-lipid metabolism, ubunikazi obujwayelekile bezimpawu zesifo sezinzwa, kanye nokuvimbela ukwakheka kwemikhiqizo yokubola. I-Vitamin ibandakanyeka ekuphendukeni kwe-enzymatic eminingana, ukwakheka kwe-glucose ne-acetylcholine, ijwayelekile ukujikeleza kwegazi kanye nezinga lokubona kwegazi. Ngokushoda kwento, izinzwa zokuphelisa izinzwa ziyachithwa, ngenxa yalokho, kubuhlungu. I-Thiamine iyi-vithamini encibilikiswa ngamanzi, kepha ekwakhiweni kwemithi isefomini elenzelwe ukunyibilika kwamafutha, ngenxa yalokho elimunzwa kahle emzimbeni.
I-Pyridoxine. Ihlanganyela ekwakheni i-histamine, ama-neurotransmitters, i-hemoglobin, ivuselela ukwakheka kwama-lipids ne-glucose, i-metabolism ejwayelekile. IVithamini A iyadingeka ekuqhekekeni kwama-amino acid, ukumunca ngokuphelele kwamaprotheni, ukujwayelekile kwesimo somsipha wenhliziyo, imicu yezinzwa, imithambo yegazi, kanye nokuqiniswa kwamasosha omzimba. I-Pyridoxine ilawula okuqukethwe kwamaminerali emzimbeni, kuvimbela ukwanda ngokweqile kwe-fluid ezicutshini nasekuthuthukiseni ukuvuvukala, kusheshisa ukuvuselelwa kwesikhumba ngezifo zesikhumba, izilonda zesikhumba esihlanzekile, ukushiswa, i-eczema.
I-Cobalamin Kwandisa ukuvikela komzimba, kulawula ukuhamba kwe-oxygen emangqamuzaneni, kwenza isimo sohlelo lwezinzwa luhambisane nesimo. I-Vitamin ibandakanyeka kwi-hematopoiesis, ivimbela ukuthuthukiswa kwe-anemia, igcine umfutho wegazi ojwayelekile, futhi ivimbele ukwakheka kwe-hepatosis enamafutha. Vitamin B12 Kuyadingeka ekwakhekeni kwama-neurotransmitters nama-hormone athile, ukunyakaza okuyikho kwezihibe ngokuhambisana nezinhlaka zezinzwa, ukugcinwa kwememori, ukugxilisa ingqondo okuthuthukile, kanye nokuvinjwa kokuwohloka komqondo okuyi-senile. Umuthi wenza isimo sesiguli sibe ngokomqondo nangokomzwelo, sisuse ukudangala kanye novalo, sithuthukisa ukulala.
Izici zokuqhathanisa zezidakamizwa
Ngezansi kunemininingwane ye-tabular ongayiqhathanisa ne-Vitamin Kombilipen eyinkimbinkimbi ne-analogue yayo - isidakamizwa iMilgamma.
I-trigeminal neuralgia, i-polyneuropathy yama-etiologies ahlukahlukene, i-pathologies yokuvuvukala yezinzwa zobuso, i-radiculitis ye-thoracic, i-radicular syndrome yomgogodla wesibeletho, i-thoracic ne-lumbar, i-pathology ebuhlungu yomgogodla
i-polyneuropathy yama-etiologies ahlukahlukene, i-neuritis, i-neuralgia, i-sciatica, ukukhubazeka kwemisipha yobuso, ukutheleleka nge-herpes komzimba, ukwenza buthaka amasosha omzimba
umjovo we-gluteal kwemisipha, ama-ampoules ama-2 ml, amhlophe, ayindilinga, ama-convex ezinhlangothini zombili, ezibhebheni ezifakwe emafilimini, amayunithi ayi-15 kwisangqa
ukujova kwemisipha ye-gluteal, ama-ampoule ama-2 ml, ama-dragee amhlophe ayindilinga, amayunithi ayi-15 ebhulini
kwesifo esinezimpawu ezinzima, i-ampoule eyi-1 ibhaliswa ngosuku ngeviki, ngesonto elizayo kuphela ama-ampoules ayi-2 kuye kwayi-3 asetshenziswa ukuhlanganisa umphumela, amaphilisi anqunyelwe ukugula okuncane futhi kwesinye isikhathi ngemuva kokulashwa komjovo, isikhathi senkambo yokwelashwa sinqunywa udokotela, kodwa hhayi Kumele kudlule amasonto ama-2
umthamo wokuqala wokubuyiselwa okusheshayo kobuhlungu ngu-1 ampoule ngosuku noma i-1 ithebhulethi izikhathi ezintathu ngosuku, ukuze uhlanganise umphumela, kufanele uhlabe ama-ampulethi ama-3 nganoma yiluphi usuku lwesikhathi samasonto ama-2, noma uthathe ithebhulethi eli-1 ngosuku ngenyanga, isikhathi sesifundo ukwelashwa okunqunywe ngudokotela
ukuphazamiseka kwenhliziyo nohlelo lokujikeleza kwegazi, ukungabekezelelani ezingxenyeni zomuthi, ukukhulelwa, isikhathi sokubeletha, iminyaka yezingane
okokuhlinza kwenhliziyo, ukuphazamiseka kwesigqi nokuhamba kwenhliziyo, ukuthambekela kokungezwani nezidakamizwa, ukungabekezeleli izingxenye zomuthi, ukukhulelwa, isikhathi sokuzala, iminyaka yezingane
ukusabela komzimba, umqubuko, tachycardia, ukujuluka
isicanucanu, i-bradycardia, ukuqubuka kwesikhumba, ukulunywa yisikhumba, ukuvuvukala, isiyezi, izimo ezethusayo, ukujuluka
ukusebenzisana namakhemikhali nezinye izidakamizwa
ukwamukelwa ngeLevodopa nePhenobarbital, imishanguzo equkethe uvithamini B iyenqatshelwa2, i-dextrose, i-penicillin, i-thiamine inhibit izinto ezinomthelela oxidizing futhi wokunciphisa, i-cobalamin ilahlekelwa ukusebenza ngaphansi kwethonya losawoti wensimbi
I-thiamine ibhujiswa ezintweni ze-sulfate, ivinjelwe ushukela, izinto ze-penicillin, uvithamini B2, ama-acetates, i-iron ammonium citrate, i-chloride ye-mercuric, i-tannic acid, uvithamini B6 yenza buthaka umphumela wokwelapha umuthi uLevodopa, ukusebenza kwe-cobalamin kuyancipha ngaphansi kwethonya lensimbi esindayo
Ama-ampoules ama-5 - ama-ruble ayi-130, ama-ampoule ayi-10 - ama-ruble angama-210, amaphilisi angama-30 - ama-ruble angama-240, amaphilisi angama-60 - ama-ruble angama-450
Ama-ampoules ama-5 - ama-ruble angama-260, ama-ampoule ayi-10 - ama-ruble angama-450, ama-ampoule angama-25 - ama-ruble ayi-1100, amaphilisi angama-30 - ama-ruble angama-750, amaphilisi angama-60 - ama-ruble ayi-1400
Yikuphi ukunqotshwa kwamavithamini okungcono - iCombilipen noma iMilgamm?
Ngezansi kunencazelo yokuqhathanisa yezidakamizwa zombili, ekuvumela ukuthi uthathe isinqumo sokuthi yikuphi ukukhetha okungcono ukukhetha - Milgamma noma Combilipen.
Ukuhlanganiswa kwengxenye kuyafana, izinto ezisebenzayo zikuqoqelalyo elifanayo. Umehluko kuphela ukuthi ayikho i-cobalamin kwisakhiwo sethebhulethi iMilgma.
ICombilipen ikhiqizwa yinkampani yezokwelapha yaseRussia, iMilgamm ekhiqizwa amaJalimane. Ngakho-ke, inani lentengo lomuthi wokuqala liphansi kakhulu kunentengo yesibili.
Amacwecwe eCombilipen awanayo ushukela egobolondweni. Ngakho-ke, lo muthi ungathathwa ngabantu abanesifo sikashukela.
I-Combilipen empeleni ayihlukile kune-Milgamma kwimithamo, inkambo yokwelashwa, izinkomba zokusetshenziswa.
Le mishanguzo icishe ibe ne-contraindication efanayo nemiphumela emibi. Yomibili le mishanguzo inqunyelwe izingane, abesifazane abakhulelwe, omama abancelisa ibele.
Imithi igcinwa endaweni enomthunzi futhi epholile ingane engakwazi ukuyifinyelela. Impilo yamashalofu yiminyaka emi-2.
I-Combilipen neMilgamma bangumuthi owodwa futhi oyinkimbinkimbi. Kodwa lokhu akusho ukuthi imishanguzo ingashintshwa futhi ifakwe endaweni yakho ngokubona kwakho. Ukuqokwa kanye nokufakwa esikhundleni kwezidakamizwa kwenziwa kuphela uchwepheshe wezokwelapha. Futhi, isiguli, uma sithatha eminye eminye imishanguzo, kufanele sixwayise udokotela ngalokhu, ngoba izakhiwo ezichazwe njengamavithamini azihambelani namakhemikhali athile.
Ukubuyekezwa kuzokusiza wenze ukukhetha
Mhlawumbe, ukwenza ukukhetha nokuthola ukuthi yikuphi okungcono - "Milgamma" noma "Combilipen", impendulo evela kubasebenzisi bethu izosiza:
Nina: "Uma ukhetha, khona-ke ukhetho lwesabelomali lungcono, ngoba, njengoba ngifunde zonke izinkomba, empeleni angitholanga mehluko. Eqinisweni, iKombilipen iyi-analogue yeMilgamm, uma imijovo icishe ibe yingxenye yentengo. ”
UDenis: "Ngiya emidlalweni yezemidlalo, ngemuva kokulimala ngilulama kuphela noMilgamm." Umuthi muhle, ubeka izinyawo zakhe ngokushesha, udinga ukubheka umthamo kuphela kanye nohlobo, ikakhulukazi njengoba kukhona ezibhebheni ongakukhetha. ”
Ngakho-ke, bafundi abathandekayo, sizamile ukukhetha ulwazi oluhlose kakhulu kulezi zidakamizwa futhi sithemba ukuthi kuzokusiza wenze ukukhetha, kepha kungcono ukubonana nodokotela. Yiba nempilo!
Umkhiqizo wamavithamini owenziwe eJalimane wenzelwe ekwelashweni okuyinkimbinkimbi kwama-pathologies wezinzwa ezihambisana ne-implement impuction. Ukusebenza komuthi kutholakala ngokunyuka kokuqukethwe kwamavithamini we-B kuwo. Lokhu kuhlanganiswa kwesidakamizwa kukuvumela ukuthi ususe ngokushesha i-pain syndrome futhi uthathe isinyathelo ngokushesha ngezicubu ezifakwayo.
Umuthi uyatholakala ngesimo samathebulethi kanye nesisombululo somjovo. Imijovo inomphumela osheshayo, ngoba into ingena ohlelweni lokujikeleza, yedlula uhlelo lokugaya. Ukwakheka kwe-Ampoule:
thiamine (uvithamini B1),
i-pyridoxine (uvithamini B6),
i-cyanocobalamin (uvithamini B12),
Ifomu lethebhulethi lifaka:
izilonda ezingavuvukeli zezicubu zezinzwa,
ukukhubazeka kobuso kanye nokulimala kwemisipha,
izilonda zokuphela kwezinzwa,
ukuvuvukala kwama-nerve node
Ukuqokwa kweMilgamm kwenziwa nge-neuralgia ne-neuritis.
Umuthi akufanele uphathwe neminye imithi equkethe amavithamini B, ukuze ungazidabuki ngokweqile kwalezi zinto.
Ukuqhathanisa kweMilgamma neCombilipen
Lapho uqala ukwelashwa, kunconywa ukuqhathanisa le mithi ngokuya ngokusebenza kahle, inhloso kanye nezindleko. Kodwa ngaphambi kokusebenzisa umkhiqizo, kunconywa ukubonana nodokotela.
Yomibili le mishanguzo iqukethe amavithamini e-B. Kukhona okufana embhalweni: imithi isetshenziselwa ukwelapha izinkinga zamathambo nethambo. Izidakamizwa zitholakala ngendlela efanayo. Ukufana kuyaphawulwa kumthamo nendlela yokusebenzisa. Yomibili le mikhiqizo ingathengwa kuphela lapho kwethulwa incwadi kadokotela.
I-Combipilene ibangela ukusabela okunjalo okunjenge-urticaria, isiyezi.
Imithi akufanele isetshenziswe ngalezi zinto ezilandelayo:
U-Epinephrine et al.
Ngaphambi kokusebenzisa lezi zidakamizwa, kufanele ufunde imiyalo esetshenzisiwe, ngoba izidakamizwa zinohlu lwe-contraindication nemiphumela emibi.
Ukubuyekezwa kodokotela mayelana neMilgamm neCombilipen
UPavel, udokotela ohlinzayo, eMoscow: “ICombilipen ishibhile. Isebenza ngempumelelo ekwelashweni okuyinkimbinkimbi kwezinguquko eziwohloka emgogodleni nasemalungeni. Ukuba khona kotshwala be-benzyl ekwakhiweni kwayo kubekezelelwa kabuhlungu kwezinye iziguli. ”
USvetlana, isazi sokusebenza kwengqondo, eSt. Petersburg: “Ukulungiselela okwethulwe kokukhiqizwa kweRussia akuhlukile kunakwethu wakwelinye izwe. Kuvame ukubekwa njengekhambi elingeziwe ngesikhathi sokuxineka kanye nokweqile. Izinhlobo zemithi ezilula zingamathebulethi nesisombululo. Okubi kubalwa: ukuphathwa kobuhlungu be-intramusky kanye nokutholakala kokungezwani komzimba. "